realme X7 Pro ကိုမြန်မာမှာတွေ့လာရတော့မှာလား?? — Anycall Mobile
By liam January 27, 20212Mins Read
Realme ရဲ့ Premium Mid-range series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ realme X7 Series ဟာဆိုရင်အရင်နှစ်ကတည်းကတရုတ်မှာ တော်တော်လေးနာမည်ရခဲ့တဲ့ Series လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ realme X7 Series ထဲက realme x7 Pro ဟာဆိုရင် မနေ့ကပဲ မလေးရှားမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုဝမကြာခင်မှာရောက်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဒီ realme X7 Series ထဲမှာ realme X7 ၊ realme X7 Pro စတဲ့ဖုန်းနှစ်လုံးပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီထဲက realme X7 ဟာဆိုရင် Mediatek ရဲ့ Dimensity 800U chipset ကိုပထမဆုံးသုံးလာတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီး realme X7 Pro ကတော့ Redmi K30 Ultra မှာသုံးထားတဲ့ Dimensity 1000+ ကိုသုံးထားပါတယ်။
တကယ်လို့ realme X7 Pro ရောက်လာခဲ့ရင် တစ်ခြား ဘယ်လို အလန်းစား Specs တွေကိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲ?
realme X7 Pro မှာ FHD+ Resolution ရှိတဲ့ 6.55-inch Super-AMOLED display ကိုသုံးပေးထားပြီး ဒီ Display ဟာဆိုရ*င် 120Hz Refresh Rate ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Screen to body ratio အနေနဲ့ relame X7 Pro ( 85.8% ) ရှိပါတယ်။ AMOLED Display သုံးပေးထားတဲ့အတွက် ဖုန်းမှာ In-Display Fingerprint Scanner ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီ Display ကိုတော့ Gorilla Glass5နဲ့ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
Performance အတွက် realme X7 Pro မှာ Dimensity 1000+ Chipset နဲ့အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီ Dimensity 1000+ ရဲ့ Performance ဟာဆိုရင် Snapdragon 865 နီးပါ စွမ်းဆောင်နိုင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ Chipset ကိုတော့ LPDDR4x RAM and UFS 2.1+Turbo Write storage နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ ဖုန်းရဲ့အပူကိုထိန်းပေးနိုင်ဖို့ Vapor Chamber (graphene + graphite ) ကိုလည်း realme ဘက်ကနေထည့်ပေးထားပါတယ်။
realme X7 Pro ရဲ့ Camera မှာတော့ 64-Megapixel Primary Camera, 8-megapixel Ultra-Wide-Angle Lens, 2-Megapixel Macro Lens နဲ့ 2-Megapixel Depth Sensor တို့ပါတဲ့ Quad Camera တို့တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Selfie အတွက်တော့ Punch-hole ထဲမှာ 32MP selfie Camera ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။
Battery အတွက် realme X7 Pro မှာ 65W SuperDart charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4,500mAh Battery ကိုတပ်ဆင်ပေးလာပါတယ်။ 65W SuperDart Charging ‌ကြောင့် ၃၈ မိနစ်အတွင်းမှာ 100 % အားအပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်မယ်လို့ realme ကဆိုထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ realme X7 Pro (8 GB RAM + 256 GB storage) version ဟာ မလေးရှာ RM1,999($494) ( မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခွဲဝန်းကျင်) ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ထွက်လာပါတယ်။ တစ်ခြား Version ဈေးတွေကတော့
6 GB RAM + 128 GB storage – 2,199 Yuan (~$323) (မြန်မာငွေ ၄ သိန်းခွဲဝန်းကျင်)
8 GB RAM + 128 GB storage – 2,499 Yuan (~$364) (မြန်မာငွေ ၅ သိန်းခွဲဝန်းကျင်) ဆိုပြီးအသီးသီးရှိပါတယ်။
အချုပ်အနေနဲ့ realme X7 Pro သာ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်လာခဲ့ရင် Upper Mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ ရွေးချယ်လို့အဆင်ပြေနိုင့်ပါ့မလား?
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၄ သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ဈေး နဲ့ 120Hz Super-AMOLED Display ၊ Dimensity 1000+ ၊ 64MP Quad cameras ၊ 65W Fast Charging ကိုရအောင်လုပ်ပေးထားလို့ပါပဲ…
ကဲ realme X7 Pro အပေါ်အမြင်လေးတွေကို Comments မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ..
Realmerealme x7 pro